LOOFY – A Directory by you and me
ကျန်းမာရေးနဲ့အညီ ချက်ပြုတ်နိုင်ဖို့ မီးဖိုချောင်ထဲမှာ သတိထားရမယ့် အချက် (၁၀) ချက်
Corona Virus က ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ အိမ်တွင်းအောင်းဖို့ ဖန်တီးပေးထားတယ်ဆိုတော့ အားလုံး ဟင်းချက်ကျွမ်းကျင်သူတွေဖြစ်နေကြပြီမလား… ဒီအချိန်က ကျွန်တော်တို့လို စားဖိုမှူးပေါက်စလေးတွေနဲ့ အိမ်မှာ အခုမှမီးဖိုချောင်ကို စ၀င်တဲ့သူတွေအတွက် ဟင်းချက်ခြင်းအနုပညာအကြောင်းလေးတွေကို လေ့လာစမ်းသပ်နေတဲ့အချိန်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အများစု သတိမထားမိတဲ့ မသိသေးတဲ့ မီးဖိုချောင်တွင်း မှားတတ်တဲ့အမှားလေးတွေကို သတိထားလို့ရအောင်နှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အညီ ကိုယ့်အိမ်ကမီးဖိုချောင်လေးကို အသုံးပြုနိုင်အောင် စုစည်းပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်… 1) အသား/ ငါးများအား ဆေးကြောခြင်း တကယ်တော့ ဘက်တီးရီးယားတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ အသား/ငါးတွေကို ဆေးကြောကြတာမလား? တကယ်တော့ အဲ့ဒီလိုမျိုး ဆေးကြောခြင်းက ဘက်တီးရီးယားတွေ… Read More ›
တာမွေဘက်ကအစားတလိုင်းတွေအတွက် စုစည်းတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ တာမွေတစ်ခွင်က အမိုက်စားဆိုင်လေးများ
တာမွေတစ်ခွင်ပြဲပြဲစင်အောင် လိုက်ပတ်ဆွဲချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အမှန်တကယ် အစားချစ်သူတွေအတွက် တာမွေမြို့နယ်ထဲက စားလို့ကောင်းလှပါချည်ရဲ့ဆိုတဲ့ ဆိုင်လေးတွေ ဒီမှာပါဗျို့….. တစ်ပုံချင်းစီအောက်မှာ ဆိုင်လေးတွေအကြောင်းကို အပြည့်အစုံရေးပေးထားလို့ ဝင်ရှိုးပြီး သွားဆွဲဖို့ပြင်လိုက်တော့နော် အကြူရီစကောထမင်းဆိုင် စကောထမင်းကောင်းကောင်းစားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အကြူရီဆိုတဲ့ဆိုင်ကိုသာသွားဗျို့……. ဒီဆိုင်လေးက ကန်တော်ကြီးထဲမှာ ဖွင့်ထားတာဆိုတော့ လေညှင်းလေးခံရင်း သူငယ်ချင်းတွေ/ မိသားစုတွေနဲ့ ထမင်းလေးစား စကားလေးပြောလို့ အရမ်းကောင်းသလို ဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်ရင်လည်းအရမ်းမိုက်တယ် စကောထမင်းအကြောင်း ပြောပြရမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့ဟင်းတွေအားလုံးက ကိုးကန့်ဒေသပုံစံအတိုင်း ချက်ထားတာ စကောထမင်းက တစ်ယောက်ကို ၇၀၀၀ နှုန်းနဲ့ ၂ ယောက်စာကနေစပြီး မှာစားလို့ရတယ်အသားဟင်း ၂ မျိူးနဲ့ အသီးအရွက် ၃ မျိုးပါတဲ့ ၂ ယောက်စာအတွက်ဆိုရင် ၁၄၀၀၀ ထဲဆိုတော့ တန်တယ်ပြောရမယ် ထမင်းကတော့ လိုသလောက်ထပ်တောင်းလို့ရတယ် ၃ ယောက်စာအတွက်ဆိုရင်… Read More ›
အစားတလိုင်းဘော်ဒါတို့အတွက် ရန်ကင်းတစ်ဝိုက်က Recommend ပေးချင်သော ဆိုင်လေးများ
Heyy You!!! ရန်ကင်းမှာ ဒါမျိုးစားကောင်းတဲ့ဆိုင်တွေရှိတယ်ဆိုတာ သိပြီးပြီလား အစားအသောက်နဲ့ပတ်သတ်ရင် အသိနောက်ကျပြီး မသိသေးဘူးဆိုတာမျိုး မဖြစ်ရအောင် ဒါမျိုး စာကောင်းတဲ့ဆိုင်လေးတွေမှာတော့ အရင်ဆုံးသွားဆွဲကြည့်သင့်နေပြီနော် တစ်ဆိုင်ချင်းစီရဲ့အကြောင်းလေးတွေကို တစ်ပုံချင်းစီအောက်မှာ ရေးထားပေးတယ်နော်.. Mala Factory Bar & Bbq ခြံဝန်းကျယ်ကျယ်မှာ ဘော်ဒါတွေနဲ့ Hang Out လုပ်ရတာကြိုက်တယ်ဆိုရင် Mala Factory Bar & Bbq က တော်တော်လေးမိုက်တဲ့ Bar လို့ ပြောလို့ရတယ် ဒီဘားလေးက အိမ်ကြီးကြီးခြံကျယ်ကျယ်မှာ ဖွင့်ထားပြီး Private ဆန်သလိုခံစားရတော့ မောင်နှမ‌တွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် အေးဆေးစကားပြောဖို့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ Date ချင်ရင်ဖြစ်ဖြစ် ကွက်တိကျနေရောပဲ ဘီယာမျိုးစုံ၊ ဝီစကီ၊ ဝိုင်တွေအပြင် ရှီXhar ဆိုလည်း အရသာ ၈ မျိုးလောက်ထိရ‌တယ်ဆိုတော့ အသောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် တော်တော်လေးကိုစုံစိနေတာပဲလို့ပြောလို့ရတယ်… Read More ›
သင်္ဃန်းကျွန်းက အစားတစ်လိုင်းတွေအတွက် တွေဝေစရာမလိုဘဲ အပီအပြင်ဆွဲဖို့ ဆိုင်ကောင်းကောင်းလေးတွေ လာပြောပေးတာဗျို့ဆိုင်အကြောင်းလေးတွေကို တစ်ပုံချင်းစီအောက်မှာရေးထားပေးလို့ ၀င်ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့အချစ်ကလေးရေ… Grill & Chill 11800 ကျပ်ထဲနဲ့ အချိန်အကန့်အသတ်မရှိ ဟော့ပေါ့ရော အကင်ရောကို အဝကြိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Grill & Chill ကိုသာဒိုးလိုက် ဘေဘီ.. ဒီဆိုင်လေးရဲ့ ထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့ စားချင်တဲ့ ဟော့ပေါ့၊ အကင် နဲ့ Side Dish တွေကို စာရွက်လေးပေါ်မှာ ခြစ်ပြီးမှာပေးရတယ် ပြီးတော့ အကင်တွေဆိုရင် ကိုယ်တိုင်ကင်စရာမလိုဘဲ ဆိုင်ကစာဖိုမှူးတွေကိုယ်တိုင် ကင်ပေးတာဆိုတော့ တူးမှာကပ်မှာကြောက်စရာမလိုဘဲ အေးဆေးထိုင်စားနေရုံပဲ နောက်ဆုံး သဘောအကျဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ အပြင်မှာဝယ်စားရင်တောင် ၄၊ ၅၊ ၆ထောင် ပေးရတဲ့ အမိုက်စားဟင်းပွဲတွေကိုပါ အဝစားလို့ရတာပဲ… Read More ›
စားရမယ့်ဆိုင် သောက်ရမယ့်ဘားတွေ ပုံအောနေလို့ ဘယ်သွားရမှန်းမသိ ခြေလှမ်းတွေပျောက်နေတတ်တဲ့ တောင်ဥက္ကလာက ဘော်ဒါဘော်ကျွတ်တွေအတွေးမမှားဘဲ အပြေးသွားသင့်တဲ့နေရာလေးတွေကို ဒီမှာတစ်ချက်ရှိုးလိုက်.. တစ်ပုံချင်းစီရဲ့ အောက်မှာ ဆိုင်လေးတွေရဲ့ အကြောင်းကို သေချာလေးရေးထားပေးတယ်နော် ဒီ La La Lah Grill & Pot ဆိုတဲ့ ဆိုင်လေးမှာက Premium Buffet 13500 ကျပ်နဲ့ Standard Buffet 11000 ကျပ်ဆိုပြီး ၂ မျိုးရှိတယ် ဒီ ၂ မျိုးက ဘာကွာတာလဲဆိုတော့ Standard Buffet က ဟော့ပေါ့သီးသန့်ပဲစားချင်သူတွေအတွက် ဖန်တီးပေးထားတာ Premium Buffet ကတော့… Read More ›
အိမ်မှာရှိတာလေးတွေနဲ့ပဲ အာဟာရဖြစ်ပြီး အရသာရှိတဲ့ဟင်းလေးတွေ ချက်စားကြည့်ရအောင်
By The Loofy Team on2Apr 2020 • (0)
အခုလိုအချိန်မျိုးဆိုတာ Social distancing တွေ Self-Quarantine တွေလုပ်တာအကောင်းဆုံးပါ.. အထူးသဖြင့်အိမ်မှာနေဖို့ပဲအကြံပေးချင်ပါတယ် ပြီးတော့ အစားအသောက်တွေကို ဆိုင်မှာဝယ်စားတာထက် အိမ်မှာကိုယ်တိုင်ချက်စားတာက ပိုပြီးကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တယ်လေ အဲ့တော့ အိမ်မှာရှိတာလေးတွေနဲ့ အလွယ်တကူချက်လို့ရတဲ့ဟင်းလေးကို မင်မင်တို့ တင်ဆက်ပေးထားတယ်နော် နောက်နေ့တွေမှာလည်း အခုလို ဟင်းချက်နည်းလေးတွေကို တင်ပေးသွားဦးမှာဖြစ်လို့ စောင့်ကြည့်ပေးကြပါနော်…
ကိုယ်ခံအားလည်းကောင်းပြီး ထမင်းမြိန်စေမဲ့ ကြက်သားဗူးသီးစပါးလင်ဟင်းလေး ချက်စားကြည့်ရအောင်
By The Loofy Team on 1 Apr 2020 • (0)
ကိုယ်ခံအားလည်းကောင်း .. ထမင်းမြိန်စေမဲ့ ကြက်သားဗူးသီးစပါးလင် ဟင်းချက်နည်း လေးတင်ပေးလိုက်မယ်နော်.. ပါဝင်ပစ္စည်းများ – ကြက်သား ( ရင်ပုံ / ပေါင် / ခြေထောက် နှစ်သက်ရာ ) – ဗူးသီး ( နုနုလေးဆိုပိုချိုမြိန်ပါတယ် ) – စပါးလင် ( အနည်းငယ်ကြေ‌အောင် ထုထားပါ ) – ရှမ်းနံနံ ( လှီးဖြတ်ထားပါ ) – ဂျင်း ( အနည်းငယ်ထောင်းထားပေးပါ ) ငရုတ်သီးအတောင့်ရှည် ( ၂ ခြမ်းခွဲထားပါ )… Read More ›
အိမ်မှာနေရင်း မိသားစုနဲ့အတူ ရှူးရှဲရဘေဝဲသုပ်လေး လုပ်စားကြည့်ရအောင်
By The Loofy Team on 31 Mar 2020 • (0)
ရှူးရှဲရေဘဝဲသုပ်လေးကို Stay at Home ရင်း လုပ်စားလို့ရအောင် ချက်ပြုတ်နည်းလေးတင်ပေးလိုက်မယ်နော် ရေဘဝဲရခိုင်သုပ် အတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများ ရေဘဝဲ ( မိမိကြိုကက်နှစ်သက်သည့် အရွယ်အစား / အကောင်ရေ ) ငရုတ်သီးတောင့် ကြက်သွန်ဖြူ / နီ စိမ်းစားငါးပိ သကြား သံပရာသီး ခရမ်းချဉ်သီး ရှောက်ရွက် ( သို့ ) နံနံပင် ဆား ချက်ပြုတ် ပြုလုပ်နည်း ရေဘဝဲကို ရေစင်အောင်ဆေးကြောပြီး .. ဆား ၊ အချဉ်သံပုရာသီး ညှစ်ထည့်ပြီး အချိန်အနည်းငယ်… Read More ›
ဟင်းတစ်ခွက်ထဲနဲ့ ထမင်းမြိန်စေမယ့် ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်ကြက်သားငပိချက် ချက်နည်း
” ထမင်းမြိန်စေတဲ့ ဟင်းကောင်းတစ်ခွက်ကို အတင်းလာလာမေးလို့ ” ချက်နည်းလေး ပြောပြလိုက်မယ် .. ဆက်ရှိုးလိုက် အခုအချိန်မှာ အစားကောင်းကောင်းစားနိုင်မှအားရှိမှာဆိုတော့ ထမင်းမြိန်စေတဲ့ ချဉ်ငံစပ်အရသာ ကြက်သားငါးပိချက် ချက်ပြုတ်နည်းလေး‌ပြောပြမယ်.. ကြက်သားငပိချက်ရဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းများ – ကြက်သား– မျှင်ငပိ– ကြက်သွန်ဖြူ– ကြက်သွန်နီ– ဂျင်း– ကြက်သားမှုန့်– နနွင်းမှုန့်– ငရုတ်သီးစိမ်း– နံနံပင် ( သို့မဟုတ် ) ရှားနံနံပင်– ဆီ ချက်ပြုတ်နည်းအဆင့်ဆင့် ကြက်သားကို ရေဆေးသန့်စင်ပြီးလျှင် လက် ၂ ဆစ်အရွယ် သော်လည်းကောင်း ၊ နုပ်နုပ်စင်း… Read More ›